20 Akanakisa Ndima dzeBhaibheri NezveKutuka uye Kutuka - Bhaibheri
iphone 5 skrini isiri kubatidza
sei kumutsidzira yakafa iphone
sei kumisa chitsotsi chingangoita mafoni
foni yangu haisi kuchaja iphone
20 Ndima dzeBhaibheri Nezve Kutuka uye Kutuka
20 Bible Verses About Cursing
Mavhesi eBhaibheri Nezve Kutuka uye Kupika
Mashoko akaipa haafanire kushandiswa neimwe nzira. Ichokwadi kuti kazhinji vanogona kuenda kana munhu akatsamwa uye asina kuzvidzora. Kana izvi zvikaitika, iwe unofanirwa kurega nguva ichipfuura kudzikama uye kukumbira ruregerero. Aya marudzi emashoko anogara achitaurwa neanobatanidzwa kana kuti kutariswa.
Chero zvazviri, muKristu haatombofaniri kutaura nezvazvo. Mumwe munhu nguva pfupi yadarika akanyorera kwandiri achindiudza kuti nhengo yeChechi yakanga yati ine pfungwa dzakavhurika uye haina hana, saka yakakumbira kuti vamwe vave nehurongwa hwakazara kuti vasamutongese zvakapusa, sezvo nyaya iyi yaifanirwa nekutaura kutuka.
Kutuka, kushandiswa zvisizvo kwezita raMwari kunowanzoitika zvisina kufunga. Mune wechitatu weMirayiro Gumi (ona bhuku reBhaibheri Ekisodho, chitsauko 20), iri pamusoro pekushandisa zita raKe zvisina maturo. Kutuka nekutuka zvinopesana zvachose nechinangwa chekusika; hupenyu hwekubwinya kwaMwari uye kubatsira kwevamwe vanhu
Jesu Izita. Jesu haasi mhere-mhere yekusvotwa. Hapana kupesana kwekusava nehanya. Hapana kutaura kwekushushikana kwakanyanya. Jesu Kristu ndiro zita reMwanakomana waMwari. Akauya panyika makore zviuru zviviri apfuura kuti afe pamuchinjikwa uye akunde rufu. Nekuda kweizvozvo, kuvapo kwedu kunogona kuwana chirevo zvakare. Uyo anoti Jesu haadanidzi izwi resimba asi anomudaidza.
Mwari izita. Mwari haasi shoko rekumira. Hapana kushamisika kwekushamisika. Hapana kuchema kuburitsa moyo kana paine kudzoka shure. Mwari ndiro zita reMusiki wedenga nepasi. Mwari akatiita kuti timushumire. Zvakare, nezwi redu. Naizvozvo, taura neushingi nezvaMwari, asi usazomboshandisa zita rake zvisina basa.
Mavhesi eBhaibheri nezve mutauro wakashata
Ekisodho 20, ndima 7:
USA tuka zita raJehovha Mwari wako, nekuti munhu anozvidza zita rake, haangamuregedzi.
Mapisarema 19, ndima 15:
Mashoko omuromo wangu ngaakufadze;
Mapisarema 34, ndima 14:
Sevha rurimi rwako kubva pane zvakaipa, nemiromo yako kubva pamashoko ekunyengera.
VaEfeso 4, ndima 29:
Usadaro rega mutauro wakasviba uuye pamiromo yako, asi zvakanaka chete uye pazvinenge zvakakodzera mazwi anovaka anoita zvakanaka kune chero anozvinzwa.
Vakorose 3 ndima 8:
Asi zvino unofanira kusiya zvese zvakaipa: kutsamwa nehasha, kutuka nekutuka.
1 Peter 3, ndima 10:
Mushure mezvose, Iye anoda hupenyu uye anoda kufara haafanire kurega makuhwa kana kunyepa kuwira pamuromo wake.
Hapana nyaya inokodzera kutaura, kana kufunga zvakaipa mazwi nekuti tiri vana vaMwari, uye tinofanira kuzvibata saizvozvo. Bhaibheri rinoti:
Munhu akanaka anotaura zvinhu zvakanaka nekuti zvakanaka zviri mumoyo make, uye munhu akaipa akataura zvakaipa nekuti zvakaipa zviri mumoyo make. Nekuti izvo zvakawandisa mumoyo make zvinotaura muromo wake; (Ruka 6, 45)
Hutsinye hunogarodzidziswa munzvimbo imwechete uye nemhando yemunhu. Chinhu chakakosha kuve nehungwaru uye uwane nzira yekushandura nharaunda kuti irege kukushandura.
Shamwari dzakaipa dzinoshatisa tsika dzakanaka. (1 VaK. 15, 33).
Tevere, ini ndoda kutaura kutaura kwakatorwa chaiko kubva muIzwi raMwari. Mumwe munhu angati, baba vacho havadi kuti titaure mazwi akashata, asi hazvisi zvekuti ini handidi, Mwari ndiye anozvinongedzera muShoko rake. Makotesheni ebhaibheri anotevera akajeka uye akananga.
Unofanira kuzvibata nenzira inoyera kuvanhu vatsvene: usatombotaura nezvehupombwe kana chero imwe mhando yekusachena kana kukara. Usataure zvisina hunhu kana zvisina maturo kana zvinyadzi nekuti izvi zvinhu hazvikodzeri. asi, rumbidza Mwari. (VaEf. 5, 3-4)
Kutaurirana kwavo kunofanira kugara kuchinakidza uye kwakanaka, uye vanofanirwawo kuziva kupindura yega yega. (VaK. 4, 6)
Usataure mazwi akashata, asi chete mazwi akanaka anovaka nharaunda uye anounza mabhenefiti kune vanovanzwa. (VaEf. 4, 29)
Asi zvino siya zvose izvi: kutsamwa, hasha, zvakaipa, kutuka, uye mashoko asina kunaka. (VaK. 3, 8)
Ivo vanofanirwa kuvandudzwa pamweya munzira yavo yekutonga, uye kupfeka hunhu hutsva, hwakagadzirwa mumufananidzo waMwari uye vakasiyana nehupenyu hwakarurama uye hwakachena, hwakavakirwa pachokwadi. (VaEf. 4, 23-24)
Uye ndinokutaurirai kuti pazuva rekutongwa, munhu wese achazopa rondedzero yemashoko chero asina basa aakataura. Nekuti iwe pachako uchatongwa, uye uchanzi hauna mhosva kana kuti une mhosva. (Mt. 12, 36-37)
Sezvatatoona muShoko raMwari, tinowana kururamisa kunzira yedu yekutsauka yekuita. Ngativei vanowirirana uye nguva dzose titsvake kuita sevana vaMwari.
Mwari Vanoregerera Hupombwe Uye Vanogamuchira Hutsva Hukama?
Bhaibheri rinotii nezvekudya zvine utano?
25 Ndima Dzakanakisa dzeBhaibheri Nezve Kudzidzisa Vana
Nei maunicorn achitaurwa muBhaibheri?
Mavhesi eBhaibheri nezvekurambana kunyaradza
30 Ndima dzeBhaibheri dzeMwoyo Yakaputsika